धेरै मोबाइल चलाउने बानी छ ? ख्याल गर्नुहोस यि कुरा,नत्र भाइरस सर्न सक्छ… -
धेरै मोबाइल चलाउने बानी छ ? ख्याल गर्नुहोस यि कुरा,नत्र भाइरस सर्न सक्छ…
कोरखबर २५ चैत, २०७६
हिजोआज विश्व तातिएको विषय हो– कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ । विश्वभर भाइसरबाट बच्ने उपायहरु बारे सचेतनामूलक सन्देशहरु प्रवाह भइरहेका छन् । ती सन्देशहरुमा ध्यान कम दिइएको विषय हो मोबाइलबाट भाइरस सर्न सक्ने सम्भावना ।
प्रायः पकेट र हातमा रही रहने मोबाइल कोरोना मात्र नभइ धेरै प्रकारका भाइरसको स्रोत पनि हो । हिजोआज सार्वजनिक स्थल, धुलो धुँवा देखि ट्वाइलेटसमेतमा निर्वाध फोनको प्रयोग गरिन्छ । जसबाट फोनमा भाइरसहरु आइरहेका हुन्छन् । फोनमा आएको भाइरस जतिबेला पनि हात हुँदै मुखमा जान सक्छन् र मान्छे विभिन्न किसिमको संक्रमणमा पर्न सक्छ ।
हालै दि सनले टेलिग्राफलाई उद्धृत गर्दै स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई यस भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर केही सुझावहरू प्रदान गरेको छ । टेलिग्राफसँग कुरा गर्दै युनिभर्सिटी अफ साउथ ह्याम्प्टनका प्रोफेसर विलियम केभिलले भने यदि तपाईले आफ्नो हात धोएर आफ्नो स्मार्टफोनको स्क्रिन छुनुभयो र त्यसपछि अनुहार छुनुभयो भने तपाईँलाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्छ ।
अर्को अनुसन्धानले भन्छ– एक औसत व्यक्तिले दिनमा २,६०० पटक फोन हेर्छ र स्मार्टफोनलाई ७६ पटक प्रयोग गर्दछ । यस अवस्थामा, कोरोना भाइरसको संक्रमण सजिलै स्मार्टफोन मार्फत फैलिन सक्छ ।
स्मार्टफोनलाई दिनको दुई पटक अल्कोहलयुक्त वाइप्सले सफा गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फ्ल्याट सतह को माध्यमबाट तिब्रगतिमा फैलने बताईएको छ ।